यौन सम्बन्धका लागि अस्ट्रेलिया सरकारको विचित्र गाइडलाइन, मानिसहरु टाउको ठोक्न बाध्य - Sawal Nepal
काठमाडौँ सवालनेपाल २०७७ माघ ६, १४:१७
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बचेर यौन सम्बन्ध राख्नका लागि सुझाव दिने क्रममा अस्ट्रेलिया सरकारले निकै विचित्र सुझाव दिएपछि त्यहाँका मानिसहरु टाउको ठोक्न बाध्य भएका छन् । न्यू साउथ वेल्सको स्वास्थ्य वेबसाइट प्लेसेफका यी सुझाव देखेर मानिसहरु जिल्ल परेका छन् । सुझाव दिने क्रममा मानिसहरुलाई कोरोनाबाट बच्नको लागि यौन सम्बन्धका क्रममा १.५ मिटरको दूरी कायम गर्न भनिएपछि मानिसहरु टाउको ठोक्न बाध्य भएको डेलीमेलको समाचारमा उल्लेख छ ।
हद त त्यतिबेला भयो जब मानिसहरुलाई एक्लै यौन सम्बन्ध राख्न सल्लाह दिइयो । नयाँ गाइडलाइनमा पहिलेदेखि साथमै बस्दै आएको पार्टनरसँग यौन सम्बन्ध राख्दा डराउनु पर्ने स्थिति नभए पनि क्याजुअल सेक्स गर्नेहरुले भने सतर्कता अपनाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न सुझाव दिइएको छ । कोभिड १९ संकटका बेला सबैभन्दा सुरक्षित यौन सम्बन्ध भनेको एक्लै यौन सम्बन्ध राख्नु भएको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरुले यौन साथीहरुले आपसी हस्तमैथुन समेत गर्न सक्ने सल्लाह दिएका छन् । यसबाहेक पार्टनरको अगाडि निश्चित दूरी राखेर आफैंले आफूलाई यौनसुख दिने क्रियाकलाप गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यो यौन संक्रामक रोगबाट बच्ने र अनिच्छित गर्भधारणबाट बच्ने उपाय समेत हुन सक्ने भनिएको छ । यौन सम्बन्धका क्रममा ३ लेयरको मास्क लगाउन पनि भनिएको छ । यसबाहेक हट मसाज र फोन सेक्सको समेत सुझाव दिइएको छ ।
आर्थिक अवस्थाको कारण पोर्नस्टार बनिन यी खेलाडी
यौ’न आनन्द दोब्बर लिन : बनाउनुस यस्तो तालिका ! – जसले तपाइको जिबनमा फाइदा पुग्ने छ ।
‘मेरो मूल्य समोसा हो, मलाई समोसाले किन्न सकिन्छ’
चार दशकपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक,घट्यो प्रतिव्यक्ति आय थप सामग्री
म्यानमारमा सेनाको गोली लागेर एकै दिन ३८ जनाको मृत्यु
विप्लवसँगको सम्झौतालाई स्वागत गर्दै डा. भट्टराईको माग : रेशम चौधरीलाई रिहा गर
युधिष्ठिर एक्लै भएको क्षण सम्झिँदै ओलीले भने– हामी एक जना ढले हजार भएर निस्किन्छौं
सिन्धुलीमा कोमल वलीले गाइन् गीत : ‘फेरि पनि ल्याउनुपर्छ केपी ओलीलाई’
वृद्धभत्ता केही समयभित्रै महिनाको ५ हजार पुर्‍याउँछौं– प्रधानमन्त्री ओली